Weerar Caawa ka dhacay Beledweyne iyo faah faahin laga helayo - Awdinle Online
Weerar Caawa ka dhacay Beledweyne iyo faah faahin laga helayo
Wararka aan Caawa ka heleyno Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay sheegayaan in werar bambino lagu qaaday Bar-koontorool oo Ciidamada Ammaanka ku leeyihiin Magaaladaas.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in weerarka bambaano lagu qaaday koontroolka Ciidamada Amaanka ay ku leeyihiin Xaafada Buundweyn Gaar ahaan Ciidanka ilaalada ka haayo Buunadada, isla markaana uu jiro khasaaro ka dhashay.
Wararka ayaa waxaa ay intasi ku darayaan in Ciidamada werarka bambaano lagu qaaday ay rasaas farabadan fureen,taas oo an weli la shaacin khasaaraha ka dhashay.
Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa bilihii la soo dhaafay waxaa ay xaaladeeda amni aheyd mid wanaagsan marka laga reebo banaanbaxyo rabshado watay oo ay dhigayeen dad kasoo horjeeda Maamulka Cusub ee Hir-Shabeelle.
Previous articleAkhriso:- 12 Qodob oo ay ku heshiiyeen Beelo ku dagaalamay Galgaduud
Next articleXiisad Caawa ka taagan degmada Guriceel